सम्पादकीय : प्रदेश शासनका तीन वर्ष « Anumodan National Daily
प्रदेश शासनले बुधबारदेखि तीन वर्ष पुरा गरेको छ । यो तीन वर्षमा प्रदेश शासन कत्तिको संस्थागत हुनसक्यो ?, प्रदेशका जनताको अनुभूति कस्तो रह्यो ? प्रदेश शासन लागू हुदा प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सेवा प्रवाहमा के परिवर्तन आयो ? आम जनताको जीवनमा के कस्तो परिवर्तन आउन सक्यो ? लगायतका पक्षमा अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् र, अझैं घनिभूत रुपमा बहस हुनु पर्दछ । किनकि प्रदेश शासन नेपालका लागि नितान्त नौलो अभ्यास र संरचना हो । संविधान सभाबाट पांच वर्षअघि नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय राज्य प्रणाली लागू भयो । संघीयताको आम जनताले प्रत्यक्ष देख्ने तथा महसुस गर्नेगरी प्रदेश शासन लागू भयो । प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन भयो । प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकार गठन भयो । प्रदेश शासन नितान्त नौलो अभ्यास र संरचना भएकाले यसको सफलता र असफलताले हाम्रो संघीयता सफल वा असफल के हुने ? भन्ने निक्र्यौल गर्छ भन्ने विश्लेषण सटिक मानिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश शासनको चर्चा गर्दा अहिलेसम्म यस प्रदेशका जनताले निकै उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुनसकेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुदैन । यो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले चार वटा बजेट प्रस्तुत गर्यो । नीति र कार्यक्रम ल्यायो । तर, प्रदेशका आम जनताको एउटा यक्ष प्रश्न कायमै छ– यो तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश शासनबाट प्रदेशमा आर्थिक विकासको त्यस्तो कुन कामको शुरुवात भयो, जसले हामीले गौरव महसुस गर्न सकौं ? प्रदेशका जनताको जीवनमा त्यस्तो के तात्विक परिवर्तन आयो, जसले प्रदेश शासनको उपस्थितिप्रति गर्व गर्न सकियोस् ? शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणमा के सुधार आयो ? सुदूरपश्चिमका जनताले प्रदेश शासनका कारण सम्मानित नागरिक भएको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो कि भएन ? यी तमाम प्रश्नबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालको आत्मसमिक्षा गर्नु उचित हुने छ । निश्चित रुपमा नौलो अभ्यास र संरचना भएका कारण व्यवस्थापकीय कमी छन् । जनशक्तिको अभाव छ । कतिपय संरचना बन्नै बाकी छन् । संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको कमी छ । तर, यी समस्या र चुनौतिको सधैंभरी दुहाई दिएर प्रदेश शासनप्रति जनतामा बढ्न थालेको अनास्था कम गर्न सकिदैन भन्ने बोध हुन जरुरी छ ।
तीन वर्षको अवधिको यात्राको समुचित र वस्तुनिष्ठ आत्मसमिक्षाले नै अगाडीका दिनका लागि मार्गदर्शनहरू तय गर्न सकिने छ । आफ्ना कमीकमजोरी तथा आत्मकेन्द्रीत मानसिकताले यो अवधिमा भएका गल्तीकमीकमजोरीको ढाकछोप गर्ने चेष्टा झन् बिडम्बना हुने छ । तीन वर्षको समग्र मुल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनतामाझ आफ्नो उपस्थितिको गतिलो अनुभूति दिन सकेको छैन भन्ने पनि बोध हुनु पर्दछ । त्यसैले पनि अहिलेसम्मका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिन प्रदेश शासनका प्रमुख, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडीको यात्रा सफल बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुु नै श्रेयकर हुने छ ।